Chii The Best Cheese Europe ine To Kugovera | Save A Train
musha > Travel Europe > Chii The Best Cheese Europe ine To Kugovera
Nguva yekuverenga: 4 maminitsi(Last Updated On: 24/04/2020)
Chinhu chaizvo inonyatsozivikanwa chokwadi kuti Europe ndiyo yakanakisisa rwendo nokuti unhu chizi. Uye somunhu chizi anoda, ungangodaro uchida kuziva ndoupi akanaka chizi Europe ine kupa uye sei kuwana nayo.
Ngatienderanei sezvatava kumhanya kuburikidza ndandanda muEurope wakanakisisa uye kupfuura rakakurumbira chizi. Tinoratidza iyo nzvimbo dziri kukurumbira dzakananga chizi. We kukurukura sei kusvika dzokugara izvi nyore uye muchizvikudza nechitima kuti European chizi yako rwendo mumwe iwe haazombokanganwi.
Switzerland musha pamusoro 450 Mhando dzakasiyana-siyana chizi vari pakati yakanakisisa chizi Europe. Its akapfuma munhoroondo mu chizi anouya hapana mumwe kushamiswa kubva Siwizarendi Ane zvakaenzana chinoshamisa mukurumbira kana totaura mukaka wavo. Nemhaka kuSwitzerland yevedza megomo, mombe nokufurira pamusoro zvinyoro, rekushongedzesa yakachena. mhou uswa-zvokudya pave mukaka zvakanakisisa izvo zvinoita kunyanya huya hunenge chizi.
zvichida The deliciously nyoro Emmental imwe yakakurumbira chizi Swiss. Uchawana pakutanga Emmental Vagadziri panguva Emmentaler Cheese Factory Schaukaeserei. Switzerland zvakare apo uchawana anofadza chizi mafekitari kuti Gruyere, girenayiti, Green Cheese, Rembudzi Milk Ricotta, Bregaglia, uye Buffalo Mozzarella.
Unogona akanyatsorevesa kuwana wakanakisisa chizi Swiss chero maguta Switzerland yakakura akadai Geneva, Zurich, kana muBasel. Unogona kusvika izvi maguta akanaka nechitima kubva mamwe maguta makuru European kufanana Paris, Berlin, kana Rome. Kuti vauye mumisha miduku famously kuzivikanwa panobva chizi izvi yakanaka, unogona kutora nezvitima maviri, rimwe guta guru uye mumwe kusvika kumaguta.
Paunofunga pamusoro yakanakisisa chizi Europe yave kupa iwe vapiwa kufunga French chizi, hapana mubvunzo creamy Brie wakaisvonaka Camembert kuuya mupfungwa. zvisinei, France chiri inozivikanwa akapfuma Roquefort, zvichida chimwe chezvinhu chizi yekare. chizi Izvi avo vane vawana kuravira.
France zvakare kumusha Boursin, munhu creamy chizi kuti anodiwa chef zhinji sezvo chinayo zvakanaka ndabika. Chèvre nderimwe yakakurumbira chizi French. Chinhu mukaka wembudzi chizi aine unaku kuti kunoenderana makore chizi; mukuru zviri, zvikuru with uye akapfuma ayo kusachinja-chinja. Tomme of Savoie ndiye wakasimba mukaka chizi aine buttery mavara-mukati uye mashava gaya.
Discover izvi flavourful French chizi nokushanyira chaunofarira maguta French. Tora chitima Paris, Lyon, Marseille, uye mamwe maguta muFrance kubva dzakawanda mumaguta makuru European. Somunhu chizi anoda, ungada kunyange kushanyira farmhouses apo veko kuti chizi. Ava nyore tichironga nokuramba rwendo rwenyu kamwe waita zvasvika maguta makuru nechitima.
KweBrussels kuna Lyon Zvitima
Marseille kuna Lyon Zvitima
Amsterdam kuenda kuLyon neTreni
Best Cheese Europe – Itari
The chizi yakanakisisa Europe inowanikwa Itari, mumwe munyika chikuru chizi vaburitsi munyika. Vamwe yakakurumbira chizi munyika vari Italian. Ndiani asina vanzwa Mozzarella, Parmigiano-Reggiano, uye Ricotta? Other nyika-raizivikanwa chizi kuti chimvuramabwe kubva kuItaly ndivo Gorgonzola, Mascarpone, Provolone, uye Pecorino. Izvi munharaunda aigadzira chizi ndivo chemhando yepamusoro uye kushandisa tsika Recipes.
The vokuItaly vanoda chizi dzavo zvikuru zvokuti vane zvakanaka chizi Europe nemitambo igamuchidzanwa kwavo. Rimwe remasangano chizi mitambo ndiyo Bra Cheese Festival ari Piedmont. Sisiri wokupemberera 'Festival Of Ricotta Cheese” kana Ricotta uye Cheese Festival rimwe gore. Head kuna Tuscany musi wokutanga Svondo muna September uye vazopemberera Pecorino Cheese Mutambo pamwe veko.
Olbia kuna Cagliari Zvitima
Cagliari kuna Olbia Zvitima
Sassari kuna Olbia Zvitima
Olbia kuna Sassari Zvitima
Tora chitima kuRoma, Florence, Milan, Naples, uye mamwe maguta makuru kuti mharidzo yakanaka chizi Europe ngaatarire kubva vaburitsi, Save A Train.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei kadhi rine Link kuti ichi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-cheese-europe/ - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura / Ave kuti / ja kana / of uye mimwe mitauro.
#chizi #Cheeze chikafu famba travelfrance travelitaly travelswitzerland